Exynos 980: एकीकृत 5G को साथ सामसु process्ग प्रोसेसर Androidsis
Exynos 980: सामसु's्गको पहिलो प्रोसेसर एकीकृत 5G को साथ
एक महिना अघि सामसुले आफ्नो नयाँ उच्च-अन्त प्रोसेसर प्रस्तुत गर्‍यो, ग्यालक्सी नोट १० मा उपस्थित, Exynos 9825। कोरियाली फर्मले अब आफ्नो प्रोसेसरको दायरा नवीकरण गर्दछ, एक मोडलको साथ महत्त्वपूर्ण महत्व राखिएको। हस्ताक्षर हामी पछि एकीकृत G जीको साथ यसको पहिलो प्रोसेसरको साथ छोड्दछ। यो Exynos 980, जो पहिले नै आधिकारिक छ।
यस प्रकारको सामसु Samsung्ग प्रोसेसरको दायरा बढाइएको छ। Exynos 980 पहिलो स्वामित्व प्रोसेसर हो जससँग 5G छ, महत्त्वपूर्ण सुधारहरूको श्रृंखलाको साथ आइपुग्नुको साथ कोरियाली निर्माता पहिले नै आफ्नो प्रस्तुतिकरण मा देखाइएको छ। कम्पनीको लागि एक महत्वपूर्ण क्षण।
यो प्रोसेसर 9820 को विकास हो, जुन ग्यालक्सी S10 मा उपस्थित छ। Exynos 980 .० ले कम कोर उपभोगको प्रस्ताव प्रदान गर्न विभिन्न कोरहरू संयोजन गर्दछ, एक शक्तिशाली प्रोसेसरको अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमताको ठूलो उपस्थिति र त्यो G जीको उपस्थितिलाई देखाउँदछ। यो5जी मोडेमको साथ आउँछ प्रोसेसरमा नै निर्मित। यसको लागि धन्यबाद, एज 2G बाट 5G नेटवर्कमा जडानहरू सक्षम गर्न सकिन्छ।
Exynos 9825: ग्यालक्सी नोट १० को प्रोसेसर आधिकारिक हो
1 Exynos 980 विशिष्टता
2 यो कहिले जारी हुन्छ?
Exynos 980 विशिष्टता
सामसु्गले यस नयाँ प्रोसेसरको बारेमा महत्त्वपूर्ण विवरणहरू साझेदारी गरिसक्यो। यसैले यस बारे के अपेक्षा गरिएको छ भनेर हामी पहिले नै जान्न सक्दछौं। यस Exynos 980 सँग5Gz बाट 6G नेटवर्कमा जडान गर्न क्षमता छ। यसले हामीलाई पनि ए प्रदान गर्दछ २.2,55 जीबीपीएस अधिकतम डाउनलोड गति.
यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो कि यो डुअल ई-युट्रा-एनआर कनेक्टिभिटी सक्रियको साथ आउँदछ। यो सबै नेटवर्क अनुकूलताको बारेमा हो, जुन G जी LTE २ सीसी र G जीको संयोजनबाट सम्भव भएको हो। यो पनि पुष्टि भयो कि यस प्रोसेसरसँग वाइफाइ networks नेटवर्कहरूको लागि सिरियल समर्थन हुनेछ। यस सन्दर्भमा सब भन्दा पूर्ण, हामी देख्न सक्छौं। सामसुले यसको विशिष्टता प्रकट गरेको छ, जो निम्न छन्:
CPU: २ कर्टेक्स- A2 कोर २.२ गीगाहर्ट्जमा र Cor कर्टेक्स-ए 77 कोर १.2,2 गीगाहर्ट्जमा घटे।
GPU: एआरएम माली G76 MP5
एकीकृत एनपीयू (न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट)
निर्माण प्रक्रिया: 8nm LPP FinFET
भण्डारण: UFS २.१, eMMC .2.1.१
मोडेम: G जी सब 5, G जी एलटीई EN-DC, LTE कोटी १ 6, LTE कोटी १ 5
क्यामेरा: १०ual MP समर्थन एकल क्यामेरा कन्फिगुरेसन डुअल कन्फिगरेसन २० +२० MP समर्थनमा
प्रदर्शन स्ट्यान्ड: 3360 1440० × १XNUMX० पिक्सेल WQHD +
भिडियो रेकर्डि।: १२० fps मा KK रिजोलुसनमा रेकर्डि।
तपाईंको विशिष्टताहरू हेर्दै, यस्तो देखिन्छ कि सामसुले यसको उच्च दायरा भित्र यसलाई प्रयोग गरिरहेको छैन। त्यसैले ग्यालक्सी एस र ग्यालक्सी नोट दायरामा वा यसको फोल्डिंग फोनहरूमा यस Exynos 980 .० को उपस्थिति अस्वीकार गरियो, जुन उच्च श्रेणीको भित्र मोडलहरू पनि हुनेछन्, अस्वीकार गरियो। त्यसो भए यसको अर्को गन्तव्य पनि छ।
यो कहिले जारी हुन्छ?
सामसुले अहिले यस प्रक्षेपणको बारेमा केहि पनि भनेको छैन Exynos 980 बाट बजार सम्म। कुन फोनहरू यसको दायरामा पहिलो प्रयोग हुनेछ भनेर थाहा छैन। यद्यपि हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, यस्तो लाग्छ कि यो यसको उच्च-अन्त्य हुनेछैन जुन यसको प्रयोग गर्दैछ।
यो सहज हुँदै छ कि यो मध्यम-दायरा भित्र मोडेलहरू हुन सक्दछ जुन यसलाई प्रयोग गर्दछ। सामसुले हिजो हामीलाई छाड्यो ग्यालक्सी A90 5G को साथ, यसको पहिलो मध्यम-दायरा मोडेल G जी को समर्थनको साथ। एक भन्दा बढी अवसरमा कम्पनीले यो बजार क्षेत्र हावी गर्न मा आफ्नो चासो देखाएको छ। त्यसकारण उनीहरूसँग सकेसम्म चाँडो सुरू गर्ने योजना छ मध्य-दायरा भित्र मोडलहरू कि उनीहरूको G जी को लागी समर्थन छ। यो प्रोसेसर त्यो प्रक्रियामा राम्रो मद्दत हुनेछ।
त्यसकारण, यो २० in० मा आइपुग्न Exynos 2020 use० प्रयोग गर्ने मिड-रेंज वा प्रीमियम मिड-रेन्जमा सामसु phones फोनहरूको लागि यो असामान्य हुने छैन। कम्पनी जाँदैछ यस बर्ष पछि प्रोसेसर उत्पादन शुरू गर्नुहोस्, किनकि उनीहरूले पहिले नै पुष्टि गरिसकेका छन्। त्यसो भए २०२० मा यसको प्रयोग गर्ने पहिलो फोन स्टोरहरूमा आइपुग्नु पर्छ। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं कोहि अर्को महीनाहरु मा सुन्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » Exynos 980: सामसु's्गको पहिलो प्रोसेसर एकीकृत 5G को साथ
वनप्लस T टिटीले यसको केही विशिष्टताहरू पत्ता लगाउन गीकबेन्चको पैदल यात्रा गर्यो